Mpanamboatra vakana voahangy loose | China Loose Pearl Beads Factory & Mpamatsy
AA16-17mm Voaloboka Baroque Voahangy Bead, Voahangy Baroque fotsy miloko fotsy, Voahangy Flameball, tsy voafehy
Ny perla baroque dia iray amin'ireo vatosoa biolojika manintona indrindra amin'ny tsenan'ny firavaka. Safidy mety indrindra ho an'ny vehivavy be herim-po izay te hampiseho an'izao tontolo izao ny maha-izy azy ireo.
Voahangy Baroque Voahangy 15-16mm Bead, Voahangy avo lenta avo lenta amin'ny fanaovana firavaka voahangy
Inona ilay Voahangy Baroque? Nahazo ahy io fanontaniana io tato ho ato. Ny valinteniko Momba ny endrika daholo izany! Ny teny hoe Baroque dia mamaritra ny endrika perila amin'ny teny teknika.
Perla vola 13-14mm AAA, Voahangy Rano Fotsy voajanahary, Perla kolontsaina malemy, vakana voahangy vita boribory antsasaky
Voahangy vola madinika tsara tarehy ireny ho an'ny fanaovana firavakao. Izy ireo dia azo atao rojo perla, haba sy peratra, na ho an'ny haingon-trano firavaka. Azonao atao ny misafidy undrilled, antsasaky ny fandavahana na ny fandavahana mba hanomezana izay ilainao.
AAA 12-13mm White Drop Coin Voahangy, Paoketra Volo Volo Volo fotsy mifampitohy amin'ny kavina
Ny Perla Coin dia voahangy kolontsaina tena fisaka, izay azo hanaovana an-tsitrapo mandritra ny andro, ary manisy fika amin'ny hatsarana manokana ho an'ny hariva. Volavola toy ny bokotra fisaka na vola madinika, ny vola madinika sy perla kalitao tsara indrindra dia hamirapiratra amin'ny voahangy tsara tarehy.
AA 1.5mm-2mm Vato Voahangy Voninkazo Voninkazo voajanahary, vakana Voahangy Rano Tena izy
Eny, tena misy ireto perla ireto! Perla tsara tarehy dia tena kely dia kely tokoa! Tahaka ny firavaka zhuji rehetra, ireo perla ireo dia perla voavolavola tena izy izay azontsika manokana avy amin'ny fambolena voahanginay manokana.
AAA 1.5mm-2mm Vato Voahangy Voninkazo voajanahary voajanahary, vakana voahangy anaty rano, vakana Voahangy marina
Manolotra karazana vakana voahangy voa maromaro izahay: perla bokotra kely, voahangy vary voa, perla kely boribory, kofehin'ny voahangy voa miloko voajanahary.
AAA 16-18mm Voaloboka Baroque Voahangy Bead, Voahangy fotsy fotsy, Pendant Voahangy baroque, Voahangy rano velona voaangona
Ny perla baroque dia karazana voahangy tsy boribory tsy ara-dalàna. Ny endrika dia mety miainga amin'ny fanamorana kely mankany amin'ny endrika boribory lavalava, miforitra, esorina na lehibe.
Voahangy marina anaty rano velona, Aaa Voahangy Rano, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Kavina fampakaram-bady, Kavina Stud Perla, Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano,